ချက်တင်ကစားတဲ့အနှစ် - ဗီဒီယိုစကားပြောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း! နိုင်ငံအားလုံး၊နိုင်ငံခြားရေး၊လောကဓာတ်လုံးကို။
અથવા - એક મણ લોકો જે ખબર.
ဒေါင်းလုပ်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပါ။ ချိန်းတွေ့ဘို့အဆက်ဆံရေး စကားပြောမပါဘဲဒီယို ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊အခမဲ့မရှိပါ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေး အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက် ဗီဒီယိုအခမဲ့ချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း အဝတ်အချည်းချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုများ